DEG DEG:(Daawo)Ciidamadii Qabsan lahaa Garoowe & Buuhoodle oo uu Cali Khaliif diyaarsaday & Dagaalkii Somaliland oo waji kale isku badalay “600 oo Askari ayaa Muuse Biixi….. – Puntland News.net
Home 2018 January 12 Puntland News, Somali News DEG DEG:(Daawo)Ciidamadii Qabsan lahaa Garoowe & Buuhoodle oo uu Cali Khaliif diyaarsaday & Dagaalkii Somaliland oo waji kale isku badalay “600 oo Askari ayaa Muuse Biixi…..
DEG DEG:(Daawo)Ciidamadii Qabsan lahaa Garoowe & Buuhoodle oo uu Cali Khaliif diyaarsaday & Dagaalkii Somaliland oo waji kale isku badalay “600 oo Askari ayaa Muuse Biixi…..
Wararka ka imaanaya magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu gaadhay degmada Widh Widh ee gobolka Cayn hogaamiyihii hore ee Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland.
Ujeedka safarka Galaydh ayaa salka ku haya qorista Malayshiyaad u daacad ah iyo sidoo kale qorshaynta weeraro ku wajahana magaalooyinka Buuhoodle iyo Garoowe oo uu Qandaraaska weerarkooda soo siiyey Mr. Galaydh hogaamiyaha Somaliland.
Dr. Cali Khaliif Galaydh oo ku galay deegaanka Widh Widh ee gobolka Cayn gaadhigiisa Raaxada oo kaliya ayaa durbaba bilaabay hirgelinta qorshayaashiisa, isagoona la kulmay hor joogayaashiisa u qaabilsan abuurista colaada sokeeye ee uu ka shaqeeyo.
Madaxweynaha Somaliland Korneyl Muuse Biixi Cabdi ayaa siiyey Qandaraas dagaal Dr. Galaydh oo ka dhan magaalooyinka Garoowe iyo Buuhoodle oo ku taamayey muddo dheer in uu ka shaqeeyo la wareegistooda, waxaana loo qarameeyey 600 oo Askari kuwaas oo lagu lifaaqi doono hawlgalkooda amaba dagaalkooda ciidamo kale oo dheeri ah.
Qaabka loo qaybsanayo malayshiyaadkan u daacada ah Cali Khaliif ayaa lagu sheegay in 350 kamid ah malayshiyaadkaasi uu u qorayo Beeshiisa Baharasame si uu u sii xoojiyo colaada uu qaybta ka yahay ee deegaanka Gumburka Cagaare, halka 150 kamid ah malayshiyaadkaasi uu ka dhigayo beesha Barkad ee uu xiligani martida u yahay amaba uu ku sugan yahay deegaankooda.
Malayshiyaadkani oo la sheegay in xiligani qaarkood ay diyaar yihiin ayaa qorshahoodu uu yahay weerar ku aadan magaalooyinka Garoowe iyo Buuhoodle walowse xogtiisa laga war hayo Dr. Cali Khaliif.